အဆင်ပြေအောင်ကာယပညာအထူးကုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေများနှင့်တာဝန်များ Template ကို – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / အဆင်ပြေအောင်ကာယပညာအထူးကုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေများနှင့်တာဝန်များ Template ကို
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 422 views
ကလေးများစိတ်ကြိုက်အစစ်အမှန်ပညာရေးလေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်ဖြေရှင်းချက် Give, လူငယ်, အပိုဆောင်းမသန်စွမ်းသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းမော်တာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဆုတ်ယုတ်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ခြွင်းချက်အစစ်အမှန်အလိုဆန္ဒများနှင့်အတူသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်.
ဝေဖန်မှုကွဲပြားခြားနားသောသို့မဟုတ်အစိုးရဥပဒေများကို အသုံးပြု. လိုက်နာစေရန်နည်းစနစ်သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး packages များအဆင်ပြေအောင်.
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးဂီယာ Get သို့မဟုတ်တောင်းဆို, ပုံမှန်နည်းစနစ်လိုက်စား.
ကျောင်းသားလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကျဉ်းချုပ်ဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Create, လူပေါင်းကောင်းသောတိုး, သို့မဟုတ်စစ်မှန်သောတိုးတက်မှု.
ဝန်ဆောင်မှုနည်းပြအတွက်တက်ရောက်ရန်, အတန်း, သို့မဟုတ်စုဝေးအဆင်ပြေအောင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာသို့မဟုတ်စရိုက်များအတွက်လက်ရှိနည်းစနစ်၏ updated စောင့်ရှောက်ရန်,.
စိတ်ကြိုက်ပညာရေးအတွေးအခေါ်များထုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ် adjust (IEPs) ဦးနှောက်သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းနှင့်အတူကျောင်းသားနှင့် ပတ်သက်..
သူတို့ကို-နှင့်လှုံ့ဆော်သူတို့ကိုအစစ်အမှန်ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးနားလည်မှုဖန်တီးကူညီပေးဖို့အပြုသဘောဆောင်ကြောင်း supply တစ်ဦးချင်းစီရဲ့တုံ့ပြန်ချက်.
တစ်ဦးချင်းစီပညာရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်အညီသင်ခန်းစာမဟာဗျူဟာများပြင်ဆင်ပါ (IEPs) ကြောငျးသားမြား၏အသုံးဝင်သောကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ.
စာရွက်စာတမ်းတိုးတက်မှုမှပြီးပြည့်စုံသောမှတ်တမ်းများကြောင်းကျောင်းသားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်, သို့မဟုတ်အလုပ်, ပါဝင်ပတ်သက်မှု, အားလုံးမှတ်တမ်းများ privacy ကိုအာမခံ.
ထုတ်ကုန်များ၏စတော့ရှယ်ယာထိန်းသိမ်းပါ, ထုတ်ကုန်, သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းတွေ.
လုံခြုံဖန်တီးဖို့ကငျြ့စံခွဲခြားသတ်မှတ်ထိန်းသိမ်းနည်း, စနစ်တကျ, နားလည်မှုနှင့်အစွမ်းထက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ.
မိဘများအကငျြ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကျောင်းသားတိုးတက်မှုလေ့လာမှုများဆက်သွယ်ပြောဆို, ပညာတတ်များ, သို့မဟုတ်စည်းရုံးရေးမှူးများ.
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေး applications များကျောင်းသားများစိစစ်သို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်ကူညီအသုံးပြုသောရှိကြ၏.
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးဖြေရှင်းချက်အရိုးပြဿနာများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမှပေးခွငျးအားဖွငျ့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောထော့နဲ့ရောဂါ.
တစ်ဦးချင်းစီကိုပြောပြပါ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းအသုံးပညာရေးအလေ့အထများအလုပ်သမား, စုစုပေါင်း-မော်တာကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရန်, အေးစက်, သိမှုဆိုင်ရာအာရုံမော်တာကျွမ်းကျင်မှု, သို့မဟုတ်အားကစားသမားများနှင့်အားကစားအောင်မြင်မှု.
အလုပ်-related စာတမ်းများအတွက်အသိပညာ-နားလညျမှုစာကြောင်းများနှင့်ပြင်ဆင်ထားအပိုဒ် Reading.
အခြားအ-လူတွေပြောနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်တက်ကြွစွာနားထောင်ခြင်း-ပေးတစ်ခုလုံးကိုအာရုံ, ထုတ်လုပ်လျက်ရှိအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်ယူ, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးမြန်းချက်မေးမြန်းခြင်း, မှားဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာ mesmerizing မဟုတ်.
critical အတွေးအခေါ်-အလုပ်သမားအကြောင်းပြချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများ၏ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာတွေ့ရဖို့ထင်, ဒုက္ခမှရလဒ်များကိုသို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်မှု.
သင်ယူခြင်းနည်းလမ်းများ-အလုပ်နှင့်ကောက်နေသင်ကြားမှု / ပြဿနာကိုပညာပေးသို့မဟုတ်အသစ်အချက်များကျွမ်းကျင်လာသောအခါတငျပွသင်ခန်းစာမဟာဗျူဟာများနှင့်နည်းလမ်းများ.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ / ကိုစူးစမ်းထိရောက်မှု-Check စစ်ဆေးခြင်း, ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြောင်းကိုလူတွေ, သို့မဟုတ်အေဂျင်စီများကုစားခြေလှမ်းများယူသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်မှုများထုတ်လုပ်ရန်.
လူမှု othersI တုံ့ပြန်မှုမသိအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူတို့ကျင့်သောကြောင့်သူတို့တုံ့ပြန်ဘာဖြစ်လို့နားလည်ခြင်း.
othersI ခြေလှမ်းများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ control-ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ရပ်များ.
အဆင့်မြင့်ပြဿနာရှုပ်ထွေးပြဿနာများကိုခွဲခြား-ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အဖြေကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ related ကြောင်းအချက်အလက်များသုတေသန.
Installing-installer package, စက်, ဝါယာကြိုး, သို့မဟုတ်ဂီယာလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့.
အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေး-Writing ကွန်ပျူတာ applications များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-ကိုကြည့်ရှုခြင်း gauge, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောညွှန်းကိန်းစက်သည်လက်ရှိတွင်ထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နေသည်သေချာဖြစ်.
စနစ်များသို့မဟုတ် tools များ၏ functioning နဲ့စီမံခန့်ခွဲ-မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာစစ်ဆင်ရေး.
ပစ္စည်းကိရိယာကို Maintenance-ကွပ်မျက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် tools တွေအပေါ်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်သောအခါန်ဆောင်မှုများအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုလိုအပ်သောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆုံးဖြတ်.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးထုတ်ကုန်များ၏သုတေသန-ကွပ်မျက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနှင့်စစ်ဆေးမှုများ, ကုမ္ပဏီများမှ, ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကဲဖြတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လုပျထုံးလုပျနညျး.
အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်သောတဦးတည်းရွေးချယ်ဖို့အလားအလာအစီအမံ ပတ်သက်. နှိုင်းယှဉ်အခကြေးငွေနှင့်ကြီးသောအမှုတို့ကိုအာဏာရနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ-စဉ်းစား.
systems ကိုဘယ်လိုပြဿနာတွေအတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်လုပ်သင့်တယ်နည်းလမ်းအဘယျသို့သောအားသုံးသပ်ခြင်း-ဖော်ထုတ်ခြင်း, လုပ်ငန်းဆောင်တာ, နှင့်လေထုရလဒ်များသြဇာလွှမ်းမိုးဦးမည်.
မှန်ကန်သောစက်ပစ္စည်း၏ပစ်မှတ်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိုအပျသောအစီအမံမှဆွေမျိုးနည်းလမ်းများအကဲဖြတ်-ကိုစူးစမ်းခြေလှမ်းများသို့မဟုတ် system ကိုစွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာအဖြစ်.
ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များ-receiver နဲ့အစိတ်အပိုင်းများသင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုမှစောင့်ကြည့်၏ကြီးကြပ်မှု, ထူထောင်မှု, နှင့် tools တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ function ကိုလုပျဆောငျဖို့လိုအပျ.
ကြီးကြပ်မှုန်ထမ်းများ၏အရင်းအမြစ်များ-အဆောက်အအုံ, ဖှယျ, သူတို့အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီလမ်းညွှန်, ကြောင်းအလုပ်အကိုင်အဘို့အထိပ်ရှေးရှေးဖော်ထုတ်.
ကျော်လွန် 1 ခုနှစ်, နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲမှ-Up နှင့်အပါအဝင်,
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာ – %